I-Boldenone Undecylenate (i-Equipoise) Izinto eziphathekayo (13103-34-9) | AASraw
/ iimveliso / Anabolics Steroids / I-Boldenone powder Series / IBoldenone Undecylenate (i-Equipoise) Izinto eziphathekayo
4.33 ngaphandle kwe 5	ngenxa ye 3 amanqaku umthengi
SKU: 13103-34-9. iindidi: I-Boldenone powder Series, Anabolics Steroids
igama: I-Boldenone Undecylenate (i-Equipoise) i-Raw material
I-Boldenone Undecylenate Raw usetyenziso lwempahla kumjikelezo we-steroids
Ukuxhobisa amagama angamaRaw
I-Equipoise impahla eqingqiweyo ngokuqhelekileyo ibizwa ngokuba yiBold U, BU, Equipoise Raw impahla, i-EQ ngabanini bomzimba okanye abakwa-UGL.
I-Boldenone Undecylenate (i-Equipoise) Ukusetyenziswa kwezinto ezibalulekileyo
I-Boldenone Undecylenate Raw impahla iqhelekileyo isetyenziswa njengeoli ejoyiweyo. Kwimarike, kukho i-200mg / ml, i-250mg / ml, i-300mg / ml, i-UGL ethile yenze i-350mg / ml kunye ne-400mg / ml. Kodwa, kuya kuba namandla kakhulu ukujova.
I-Boldenone Undecylenate Raw material ngokukodwa ilingana nehomoni i-Dianabol, ngaphandle kwe-hormone yase-Dianabol yenzelwa ukusetyenziswa komlomo kwaye iqulethe i-17AA kunye kunye nesi sizathu esineeyure ezisibhozo zokuphila. I-Equipoise impahla engabonakaliyo ayiqukethe iqela le-17AA eyenza u-Dianabol abe mfutshane kangaka, okubangela ukuba i-EQ ihlale emzimbeni ixesha elide kwaye ngenxa yoko yenza kube lula kakhulu ukwenza ukwakha ubunzima obukhulu kunye namandla.
I-Boldenone Undecylenate Raw material, ebizwa ngokuba yi-EQ, isetyenziswe ngababubi bomzimba kunye nabagijimi ukuba banyuse ubunzima bemisipha yabo, bandise ukunyamezela kunye nokuveliswa kweefom egazi ebomvu emzimbeni owanceda unyanzelekile kuba iiseli zegazi ezibomvu zithwala i-oxygen kwaye ukuba igazi lakho licebile i-oksijeni, uhlala ixesha elide ngexesha lokusebenza ngokukhawuleza okanye ukusebenza. I-Boldenone Undecylenate Raw impahla, okanye i-EQ ithandwa phakathi kwezembaleki, abakhi bomzimba kunye nabathandekayo bempilo kuba linika inzuzo encinci kodwa eqhubekayo ngexesha lokunyuka kwexesha. Ezi ntshukumo zibizwa ngokuba yi-EQ. I-EQ inokulawulwa kwimizi ephuma kwi-200mg ukuya ku-600mg ngeveki kungekho kweveki ezilishumi elinesibini.
Isexwayiso kwiBoldenone Undecylenate Raw material
Nangona ihlala isebenza ixesha elide, i-Equipoise Raw impahla ifakwe ubuncinane kanye ngeveki ngabagijimi. Ixhaphake kakhulu kwisilinganiso se-200-400mg (4-8 ml, 50mg version) ngeveki amadoda, 50-75 mg ngeveki yabasetyhini. Ukuba inguqulo ye-25mg ibe yinto ekhoyo kuphela, umthamo we-injection ungenakukhathazeka. Ishedyuli yesilinganiselo sinokuhlulwa ngokubanzi, mhlawumbi iisenki zinikwe zonke iintsuku zokunciphisa ukungazinzi. Omnye umele aqikelele ukuba ajikeleze ii-site zangenisi rhoqo, ukuze agweme ukucasula okanye isifo. Ukuba umbane okhulu kakhulu ujojowe kwisayithi enye, i-abscess ingafaka ifom efuna ukucoca. Ukuze ugweme ingxaki enjalo, abagijimi baya kuthi banciphise i-injection nganye kwi-3ml kwaye babuyisele kwakhona nganye indawo ngaphandle kwesinye ngeveki, mhlawumbi nganye ngeveki. Nge-Equipoise Izinto eziphathekayo ezi zinto zingadinga ukusebenzisa i-gluteus kuphela, kodwa kunye namathanga angaphandle kwisayithi lokungena. Ngokuqinisekileyo zonke iingxaki ezinxulumene ne-25mg kunye ne-50mg iimveliso ezikhohlisiwe zipheliswe kunye ne-100 mg entsha kunye ne-200mg / ml eziguqulelwe kule steroid, ecaca ukuba unike umsebenzisi inkululeko engaphezulu kunye ne-injection induduzo.
Impendulo enzulu ye-Equipoise Raw material yimizuzu emide yokuphila, okungenani ubuncinane kwiintsuku ze-12. Oku kubangela ixesha elongezelelweyo lexesha emva kwejoza lokugqibela apho amazinga awanelanga ngokwaneleyo ukufumana i-anabolism efanelekileyo, okanye aphantsi ngokwaneleyo ukuba avumele ukubuyiswa kwenzeke. Isisombululo kule ngxaki kukusebenzisa i-Equipoise Raw impahla kwiphondo engaphambili.
Ngaphandle kokukhethwa kwe-EQ ngaphezu kwe-Dianabol, i-Equipoise Raw impahla iye yakhula ngokutsha kwaye iyintandokazi yamagunya olawulo. Abaqeqeshi bajonga i-EQ njengokuba i-Deca Durabolin ibe yindawo ekhethiweyo yokutshintshwa, ngokuqinisekileyo ukuba ukuzuza kwamandla kunye nobunzima be-mass muscle kunye ne-EQ kwenzeka ngaphandle kwemiphumo emibi yeCaa. Ukongezelela, i-EQ ichaphazela ngokukhawuleza ukujikeleza kwegazi kuwo wonke umzimba, onika izihlunu zomzimba wakho ngokukhawuleza kwegazi abayidingayo ngexesha leeseshoni zoqeqesho kunye / okanye ukuphakamisa.
Akunakho umakhi wongxowankulu ngokukhawuleza, kunoko i-Equipoise Raw impahla iya kukhangela ukubonelela ngokukhawuleza kodwa okuzinzileyo kwamandla kunye nobukhulu bomzimba obukhulu. Imiphumo emihle yale mveliso ibonakala xa isetyenziselwa ukujikelezwa kwexesha elide, ngokuqhelekileyo lihlala ixesha elingaphezulu kweeyure ze-8-10 ngexesha. I-muscle ifunyenwe akufanele ibe yi-bulk ebonakalayo kunye ne-androgens, kodwa ichazwe kakhulu kwaye iyomelele. Ekubeni i-bloat yamanzi ayinakunceda kakhulu ububanzi bomzimba, ubuninzi bobukhulu obuninzi kumjikelezo we-Equipoise Raw material buya kugcinwa emva kokuba isilwanyana siphelile. Kuyathakazelisa ukuba uqaphele ukuba izinto ezizimeleyo ze-Equipoise Raw kunye ne-classic drug bulking drug Dianabol ziphantse zifana. Kwimeko ye-Equipoise Raw material i-compound isebenzisa i-l7beta ester (engabonakaliyo), ngelixa i-Dianabol i-17 alpha alkylated. Ngaphandle kwale milekyuli iyafana. Ngokuqinisekileyo benza ngendlela eyahlukileyo emzimbeni, oya kubonisa i-17-methylation nemiphumo ngaphezu kokusebenza komlomo kwe-steroid.
Le yinto eyisiseko ye testosterone kunye ne-Equipoise Raw impahla. I-Equipoise Raw material ivumela umlinganiselo osezantsi we testosterone, ngaphandle kokunikela ngokubaluleka kakhulu ngokwezinto ezilindelekileyo. I-Estrogen buildup kufuneka ilawulwe ngolu hlobo, kodwa kusekufuneka lufike kwindawo ekunceda ngayo ekukhuthazweni kwe-anabolic. Umgca omkhulu oqalayo wokwakha isisu. Umjikelo omkhulu kubo bonke abaqalayo ekwakheni umzimba kunye nabanye abafuna ukufumana ubunzima. Isiphumo siphumo siphumo lokufumana amaninzi kunye neprojektri ze-androgen.
Boldenone Undecylenate Raw impahla
I-EQ yinto enokusetyenziswa kwezinto eziluhlaza. I-10grams / 10ml.
Boldenone Undecylenate Raw material Ukuthengisa
Indlela yokuthenga izinto zeBoldenone Undecylenate Raw: Thenga i-Equipoise Raw impahla evela kwi-AASraw
I-AASraw inikezela ubumsulwa 98% Boldenone Undecylenate / I-Equipoise i powder eluhlaza kumalungu omzimba okanye iilabhu zangaphantsi zokusetyenziswa kwegciwane.
I-Equipoise Raw impahla Iireyipi:
10g Boldenone Undecylenate Raw material material
12g Boldenone Undecylenate Raw material material